Waa sidee xaaladda weeraryahanka Chelsea Pedro ? | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Waa sidee xaaladda weeraryahanka Chelsea Pedro ?
Weeraryahanka kooxda Chelsea Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma, oo loo garan ogyahay Pedro, ayaa wuxuu xilli hore kasoo laabtay ciyaaraha ay Chelsea isugu diyaarineyso ololaha soo aadan, isagoo kasoo duulay Asia.
Xiddiga caalamiga ah ee reer Spain ayaa waxaa lagu sameyn doonaa baaritaanno dheeraad ah ka dib markii uu dhaawac sanka ah kasoo gaaray ciyaartii ay Chelsea shalay oo Sabti aheyd guusha 3-0 ah ka gaartay Arsenal.
Pedro waxay isku dheceen goolhayaha kooxda Arsenal David Ospina qeybtii hore ee ciyaartii ka dhacday garoonka Buulka Shimbiraha, waxaana lagu bedelay Jeremie Broga.
Tababaraha Chelsea Antonio Conte wuxuu daaha ka qaaday inuu ku rajo weyn yahay inuu Pedro ciyaari karo kulamada kale ee saaxiibnimo ee ay ku ciyaari doonaan Asia. Laakiin Chelsea waxay xaqiijisay subaxnimadaan Axada ah inuu xiddigaani ku sugnaa Isbitaal ku yaalla caasimadda Beijing xalay oo dhan.
Hadana uu kusoo laabtay caasimadda London si xaaladdiisa qiimeyn dheeraad ah loogu sameeyo. Hase yeeshee, sawir uu soo dhigay Instagram iyo farriin uu usoo diray taageereyaasha Chelsea wuxuu ku xaqiijiyey inay xaaladdiisu wanaagsan tahay.
Chelsea oo difaacaneysa koobka England Premier League ayaa kulankeeda xigga ee saaxiibnimo wajihi doonta kooxda Bayern Munich ciyaartaasoo Talaadada ka dhici doona garoonka National Stadium ee dalka Singapore.